Ma xallin karno isbeddelka cimilada Midwest la'aanteed. Waxa halkan ka dhacaya waxay samayn doonaan ama jebin doonaan horumarka adduunka oo dhan. Gobolkayagu waxa uu hoy u yahay 1/3 ee qiiqa Maraykanka, sidoo kale waxaanu nahay mishiinka awooda xalinta cimilada iyo rajada cimilada. Tani waa waqtigii aan ku dhiiran lahayn oo aan dhammaan galno - nagu soo biir!
McKnight Foundation ayaa hormuud u ah maalgeliyaha xalalka cimilada ee Midwest iyo aasaaska gaarka ah ee ugu weyn ee Maraykanka si loo sameeyo a hibaynta eber saafiga ah ballan qaad.
Qoraal Video ah
Halkan Midwest, oo ah xudunta u ah dalkan, waxaan arki karnaa calaamadaha mustaqbalka: laga bilaabo beeraha dalagyada ee engegan ilaa cirro badan iyo harooyin dab ah. Isbeddelka cimiladu waxay beeraysaa fowdo inagu xeeran. Tani waa hal mustaqbal oo suurtagal ah.
Laakiin inta heerkulku kor u kacayo, dhalinyaraduna sidoo kale. Waxay dalbanayaan mustaqbal halkaas oo dadka iyo meeraha ay ku koraan jiilasha soo socda. Waxay og yihiin in aanay goori goor ahayn, iyo in aynu abuurno mustaqbalkeenna.
Mustaqbalkaani waa mid ay caruurtu ku mergado wasakhowga ay ku neefsan karaan cadaalada, halkaas oo magaalooyinka iyo magaalooyinka ku tiirsanaa shidaalka wasakhaysan ay hadda ku kobcayaan horumarka tamarta nadiifka ah.
Wadnaha Ameerika waa eber si geesinimo leh oo ficil cimileed cusub loo sameeyo. Waxaan guranaynaa dabaysha iyo cadceedda, waxaanan samaynaynaa gaadiid koronto ah oo dhaqaalaha hore u sii wadi doona. Waxaan naqshadeyneynaa shabkada caqliga leh ee mustaqbalka si aan u gaarsiino 100% tamar nadiif ah.
Oo haddii aan ka samayn karno Midwest, waxaan ku samayn karnaa meel kasta.
Si aan mustaqbalkan u abuurno, waa in aan hadda wax ka qabannaa, waa in aan si geesinnimo leh u dhaqannaa. Waa inaan si wadajir ah wax uga qabannaa. Tani waa mas’uuliyadda ina wada saaran, maxaa yeelay waxa la isku hayaa maaha wax ka yar masiirka aynu wadaagno.
Tani waa waqtigeena.
Credo aan khayaali ahayn, Soo saarista Fiidiyowga
Yinka Ladeinde, Sheeko
Dan Thiede, Sarkaalka Sare ee Isgaarsiinta McKnight
Na Eng, McKnight Agaasimaha Isgaarsiinta
Sanduuqa Sinaanta Tamarta Cimilada iyo Nadiifinta
Jiilka Cimilada, A Will Steger Legacy
Isbahaysiga Shaqooyinka Nadiifinta ee Illinois
Falka Dadka Illinois
Soo Celinta Prairie